Madaxweynaha oo difaacey go’aankii ay ka qaateen dalka IRAN | shumis.net
Home » galmada » Madaxweynaha oo difaacey go’aankii ay ka qaateen dalka IRAN
Madaxweynaha oo difaacey go’aankii ay ka qaateen dalka IRAN
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa beeniyay wararka sheegaya in sababta ay Soomaaliya xiriirka ugu jartey Iraan ay la xiriirto xurgufta siyaasadeed ee dhex taalla Boqortooyada Sacuudiga iyo xukuumadda Tehran.
“Wararka ku saabsan inaan taageerada Sacuudiga awgeed xiriirka ugu jarney Iiraan sax ma ahan. Muddo ayaan si hoose dabagal ugu hayney dhaqdhaqaaqa saraakiil reer Iiraan ah oo mad-habta Shiicada ku faafinayey Soomaaliya. Saraakiishaasi waxay horey uga soo hawlgaleen dalal kale oo hawlo noocaani ah ay ka soo qabteen. Haatanna waxay doonayeen inay dalkeena fitno taa la mid ah ka abuuraan. Ilaahay mahaddii xog buuxda ayaan ka helnay, waana ka tashanay, inagoo eegayna danta qarankeena’’.
Hay’adda nabad sigudda ee NISA ayaa soo bandhigtey laba nin Baasabarooadod, dhamaadkii bishii hore kuwaas oo ay sheegeen in ay Mad-habta Shiicada ku faafinayeen Muqdisho, Gobolada Dhexe iyo Qardho. maamulka Qardho iyo Waxgaradku waxay NISA ka dalbadeen faah-faahin arrintaas ku saabsan, maadaama aysan ogeyn horeyna u dhicin in hay’ado IRAN halkaas ka hawlgalaan.
Maalintii Khamiista ayaa war murtiyeed ka soo baxay shirkii Xukuumadda Federaalka lagu sheegay in si rasmi ah loo jarey cilaaqaadkii IRAN, waxaana diblomaasiyiinta IRAN loo qabtey saddex maalmood in ay Soomaaliya uga baxaan oo maanta ku eg.
Si kastaba Cilaaqaadka Soomaaliya u jartey IRAN ayaa ku soo beegmaya xilli Sucuudigu IRAN u jarey dhamaan cilaaqaadkii Diblomaasiyadeed iyo kii dhaqaale, waxaana ku garab istaagey dalal kale oo carbeed oo ay ka mid yihiin Sudaan iyo Baxreyn.
Dhanka hoose uga dhiibo aragtidaada adiga oo isticmaalaya Facebook
Title: Madaxweynaha oo difaacey go’aankii ay ka qaateen dalka IRAN
Posted by galmada Net, Published at January 11, 2016 and have 0 comments